Guddiga Gurmadka fatahaadaha ee Culimada iyo Ganacsatada oo ka warbixiyay xaaladaha Fatahaadaha | Banaadir Times
HomeUncategorisedGuddiga Gurmadka fatahaadaha ee Culimada iyo Ganacsatada oo ka warbixiyay xaaladaha Fatahaadaha
Kulan ay isugu yimaadeen Guddiga Gurmadka Fatahadaha ee Culimada iyo Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa looga warbixiyay waxyaabaha uga qabsoomay howlihii gurmadka fatahaadaha ay wadaan.
Kulankan ayaa waxa looga hadlayay xaladaha ka dhashay fatahada wabiyada Jubba iyo Shabeelle, kuwaasi oo ay ku barakaceen in ka badan 60,000 oo qoys. Inkastoo ay haatan ugu daran tahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sheek Aadan Sheekh Cali Diiriye oo ah afhayeenka guddiga gurmadka culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ka war bixiyay waxyaabihii u qobsoomay inta ay ku jireen gurmadka loo fidinayey dadka ay sameyeen fatahadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Previous articleWabiga Shabelle oo fatahaad hor leh ka sameeyey Balcad